မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-01 > မိခင်ရဲ့နေ့တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု
အမေများနေ့အတွက်မိခင်များနေ့သည်မိဘတစ် ဦး နှင့်သူတို့၏သားသမီးများကြားရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဂုဏ်ပြုရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒေဗောရကို့တွန်အတွက်အမေများနေ့သည်အထူးကြင်နာတတ်သောအချစ်၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေဗောရသည်စာနယ်ဇင်းသမားဖြစ်ပြီးအကြမ်းမဖက်ရေးနှင့်လူမှုရေးအထောက်အပံ့များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်သည်။ သူမချစ်မြတ်နိုးသော New Orleans ရှိချို့တဲ့သောရပ်ကွက်များရှိလူများအားကူညီခြင်း၏နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ မိခင်များနေ့ ၂၀၁၃ မှာအရာရာပြောင်းလဲသွားတယ်။ သူမဟာချီတက်ပွဲအတွင်းမှာပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူ ၂၀ ကျော်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ လူဆိုးဂိုဏ်းဝင်နှစ် ဦး ကအပြစ်မဲ့တဲ့လူစုလူဝေးကိုမီးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဒေဗောရအစာအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။ ကျည်ဆန်သည်သူမ၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။
သူမသည်စစ်ဆင်ရေးသုံးဆယ်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ပေမယ့်အစဉ်အမြဲအမာရွတ်လိမ့်မည် ရပ်ရွာကိုသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်၏သတိပေးချက်။ အမေနေ့ကမင်းအတွက်ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ သူမသည်ထိုနေ့၏ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ဉာဏ်နှင့်၎င်းနှင့်အတူဖြစ်ပေါ်လာသောနာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်၊ သို့မဟုတ်သူမ၏အဖြစ်ဆိုးကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်အပြုသဘောဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းရွေးချယ်မှုနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒေဗောရအချစ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ပစ်သတ်သူကိုထွက်ရောက်ရှိလာပြီးထောင်ထဲမှာသူလည်ပတ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူ၏ဇာတ်လမ်းကိုကြားလို။ သူဘာကြောင့်ဒီလောက်ဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူနေရတာလဲဆိုတာကိုသိချင်ခဲ့သည်။ ဒေဗောရသည်ပထမဆုံးအကြိမ်လာရောက်ပြီးနောက် Sagittarius အားသူ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲရန်နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေးတွင်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးပြောင်းလဲမှုကိုအာရုံစိုက်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
Als ich von dieser unglaublichen Geschichte hörte, konnte ich nicht anders, als an die lebensverändernde Liebe unseres eigenen Erlösers zu denken. Wie Deborah trägt auch er die Narben der Liebe, ewige Erinnerung an die hohen Kosten seines Wirkens, um die Menschheit zu erlösen. Der Prophet Jesaja erinnert uns daran: «Er wurde wegen unserer Sünden durchbohrt. Er wurde wegen unserer Sünden bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt» (Jesaja 53,5 HFA)။
ထိုအံ့သြဖွယ်အရာ? ယေရှုသည်ယင်းကိုစေတနာအလျောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမသေဆုံးမီသူသည်းခံနိုင်မည့်နာကျင်မှုကိုသိသည်။ အပြစ်မဲ့သောဘုရားသခင့်သားတော်သည်လူသားတို့၏အပြစ်အားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ပယ်ရှားရန်၊ ဘုရားသခင်ထံပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့်မကောင်းမှု၊ ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်နုတ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုလိုလိုလားလားယူခဲ့သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသတ်သောသူတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါရန်ဖခင်အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အကန့်အသတ်မရှိသိ၏။ ယနေ့ကမ္ဘာတွင်ဒေဗောရကဲ့သို့သောလူများမှတစ်ဆင့်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ရခြင်းသည်အားရှိစရာပင်။ တရားစီရင်ခြင်းအပေါ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ လာမည့်မိခင်များနေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သူမ၏ပုံသက်သေအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရနိုင်သည်။ သူသည်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်အားကိုးပြီးနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်၊ သူပြုခဲ့သမျှကိုလုပ်ရန်၊ ချစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။